हेयरकटहरू र गोपनीयता, परिचय वा प्रयोगकर्ता अनुभव? | Martech Zone
हेयरकटहरू र गोपनीयता, परिचय वा प्रयोगकर्ता अनुभव?
मङ्गलबार, जुन 12, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
प्रत्येक दुई हप्ता म मेरो स्थानीय भ्रमण गर्दछु सुपरकर्ट्स। म जहिले पनि उत्तम कटौती पाउँदिन, तर यो सस्तो छ र त्यहाँका मानिसहरू वास्तवमै राम्रा छन्। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण, यद्यपि, सुपरकर्ट्सले म को हुँ भनेर सम्झना गर्दछ। जब म भित्र जान्छु, तिनीहरू मेरो नाम र फोन नम्बर सोध्छन्, यसलाई तिनीहरूको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुहोस्, र तिनीहरूले मेरो नोटको पछिल्लो कपाल काट्ने समयको साथ साथै मलाई यो कसरी मनपर्दछ भन्ने नोट प्राप्त गर्दछन् (# around वरिपरि सिचिका काटेर वरिपरि)। खडा भाग)।
मैले प्रयोग गरेको (निजी) जानकारीको प्रयोगले मेरो प्रयोगकर्ता अनुभवलाई सुपरकर्ट्ससँग राम्रो बनाउँदछ र मलाई फिर्ता आउँदछ। चाखलाग्दो अवधारणा, हुह? मलाई बारम्बार ठाउँहरू मनपर्छ जहाँ उनीहरूले मेरो नाम याद राख्छन्, मलाई कफि कत्ति मनपर्दछ, कसरी मेरो शर्ट चुनिन्छ, वा मलाई कपाल काट्नु पनि मन पर्छ! म धेरै भन्दा धेरै फिर्ता आउँदछ किनकि अनुभव यति उत्तम छ। म केहि शानदार होटलहरुमा बसेको छु जहाँ द्वारपालले मेरो नाम सम्झिन बिन्दु बनाएकोमा म छक्क परें। यो प्रयासको थोरै हो जुन मलाई फिर्ता र मेरो व्यापार विस्तार गर्न राख्छ। कम्पनीहरूले डेटा संकलन र प्रयोग दुबै सफल र सराहना गरिन्छ।
मेरो उपकरणहरू, साइटहरू, र अनलाइन बानीहरू फरक हुनुहुन्न, ठीक छ? म जानकारी ... कहिलेकाँही व्यक्तिगत जानकारी ... तिनीहरूको साथ मेरो अनुभव सुधार गर्न अनलाइन साइटहरू र प्रणालीहरूमा पेश गर्दछु। अमेजन मेरो खरीदलाई राम्ररी ट्र्याक गर्दछ र त्यसपछि अतिरिक्त आईटमहरू सिफारिस गर्दछ जुन म रुचि राख्दछु। यदि म एक महान ब्लगमा गएँ भने, सामग्रीको साथ गुगल एडवर्ड्सले मलाई रुचि उत्पादन वा सेवामा देखाउन सक्छ जुन म रुचीएको छु। साईट, मेरो जानकारी कुकीमा राख्न सकिन्छ यसैले यसले देखाउँदछ त्यसैले मैले जानकारी फेरि भर्नु पर्दैन। यो राम्रो छ! यसले मेरो समय बचत गर्दछ र मलाई राम्रो परिणामहरू दिन्छ। के यो सबैको बारेमा हो?
तथ्य यो छ कि प्रत्येक कार्य र डाटा को हिस्सा तपाईं इन्टरनेट मा उपयोग गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ आफ्नो प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न को लागी हो शानदार, कुनै समस्या छैन। डाटा स्वैच्छिक रूपमा स .्कलन गरिएको छ। तपाइँले कुकिज स्वीकार्नु पर्दैन, वेबसाइटहरूमा लगईन गर्नुहोस्, अरू प्रयोग गर्नुहोस्, वा इन्टरनेटमा जडान कहिलै पनि आउँदैन। मेरो लागि, गोपनीयता सबैमा मुद्दा होइन, सुरक्षा मुद्दा हो। प्राइभेसी इन्टरनेसनल हालसालै गुगलले उनीहरूलाई 'गोपनीयता' मा सबैभन्दा खराब रेटिंग्स दिए पछि। मैले लेख पढ्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो कि यो एउटा कडा चीज हो। गुगलको डाटा स collection्ग्रह विशुद्ध रूपमा यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि राम्रो अनुभव निर्माण गर्नका साथै उपभोक्ताहरूलाई व्यवसाय जडान गर्नका लागि हो।
प्रसिद्ध Googler, म्याट कट्सले गोपनीयता इन्टरनेसनललाई जवाफ दियो विस्तृत प्रतिक्रियाको साथ जुन मैले सोचें कि यसलाई साँच्चिकै टाँगेको छ। गुगलले सुरक्षाको साथ अतुलनीय काम गर्दछ - तपाईले अन्तिम चोटि कहिले थाहा पाउनुभयो जब गुगलबाट निजी डेटा ह्याक गरिएको वा दुर्घटनामा द्वारा रिलीज गरिएको थियो?
गुगलले डाटा कसैलाई बेच्दैन, तिनीहरूको मोडलले व्यवसायहरूलाई तिनीहरूको प्रणाली पहुँच गर्न, उपभोक्ताहरूले यसलाई पहुँच गर्न अनुमति दिन, र गुगलले ती दुई मध्ये एक जोड्दछ। त्यो एक अविश्वसनीय दृष्टिकोण हो र जुन म द्वारा प्रशंसा गरिएको छ। म गुगललाई मेरो बारे यति धेरै जान्न चाहान्छु कि तिनीहरूको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने मेरो अनुभव दिन प्रति दिन राम्रो र राम्रो हुँदै जान्छ। म कम्पनीहरूमा पुग्न चाहन्छु कि उनीहरूले मलाई सिफारिस गर्छन् - जसको उत्पादन वा सेवाहरू हुन सक्छन् जुन म रुचिन सक्छु।
गोपनीयता इन्टर्नेशनल रैंक सुपरकर्ट्स कसरी म अक्सर जान्छन् ट्र्याक, मेरो परिवार को सदस्य को हुन्, र हाम्रो कपाल प्राथमिकता के हो? म अनुमान लगाउँदैछु कि उनीहरू सुपरकर्ट्सले जानकारी संकलन गर्न रोक्न चाहन्छन्। तब म आफैंले प्रत्येक चोटि भ्रमण गर्नु पर्ने हुन्छ मैले… जब सम्म म रोक्दिन र अरू कसैलाई भेट्टाए पछि गरे याद राख्नु।
मलाई लाग्दछ कि तल्लो रेखा यो हो ... कम्पनीहरू दुरुपयोग तपाईंको डाटालाई बेवास्ता गर्नुपर्दछ, तर ती कम्पनीहरू प्रयोग तपाईंको डाटा पुरस्कृत हुनु पर्छ। मलाई ट्र्याक गर्न रोक्नुहोस्, गुगल! मलाई तपाईले प्रदान गर्नुभएको प्रयोगकर्ता अनुभव मनपर्दछ।
म मानिसहरूलाई विज्ञापनमा माया गर्छु ...
क्लिक गरिएको वर्डप्रेस प्लगइन व्यवस्थापकको साथ जारी गरियो
जुन 12, 2007 मा 3: 39 PM
PS मैले यो सन्देश टाइप गर्नु बाहेक केहि गर्नु परेन .....b/c तपाईको कमेन्टले मलाई मेरो कामको कम्प्युटर र मेरो ल्यापटपमा पहिले नै थाहा छ। त्यो धेरै राम्रो कुरा हो ... र यसले मलाई महत्त्वपूर्ण महसुस गराउँछ।
जुन 12, 2007 मा 4: 30 PM
तपाईं हो महत्त्वपूर्ण! 🙂